UYILO LWESIQITHI SELITYE - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Uyilo lweSiqithi seLitye
Apha ngezantsi sabelana ngeziyilo zekhitshi zamatye ekhitshi kubandakanya igranite, i-quartz, imarble, ilitye lesepha, i-veneer kunye nemibono yamatye.
Xa kufika ixesha lokongeza isiqithi esiphakathi ekhitshini lakho, zininzi izimvo zoyilo onokukhetha kuzo. Ukuqwalaselwa okubalulekileyo xa ukhetha imiphezulu yeetafile zamatye kwisiqithi sakho sasekhitshini ziimpawu zayo, njengokumelana nobushushu, ukuba litye kangakanani ilitye, ukuhlala ixesha elide, kunye nokukhetha uyilo. Uhlobo ngalunye lwamatye anezinto ezithile ezilungileyo nezingalunganga ezichaphazela isigqibo sakho.
Izixhobo zokubala zesiqithi seGranite
Izixhobo zokubala zesiQithi seQuartz
Izixhobo zamanzi zeQuartz zeSiqithi seKhitshi
Izixhobo zokuQala isiQithi seMarble
Izixhobo zokubala Island Island
I-Veneer yamatye kwiiIqithi zeKhitshi
Isitena seBrick kwiiKhitshi zeIqithi
I-Veneer yaMatye aQinisekisiweyo kwiiIqithi zeKhitshi
Uyilo loCwangciso lweSiqithi seKhitshi
I-Granite lilitye lendalo elenziwe kwilitye elinyibilikileyo elicinezelweyo phantsi komhlaba. Ngenxa yeekristali zamaminerali, zihlala ziyi-feldspar, i-quartz kunye nezinye iiminerali, iqhekeza ngalinye legranite lahluke ngokupheleleyo. Xa ukhetha igranite kwindawo ekumelana nayo kwisiqithi setafile, iya kuba yodwa. Kwaye obo bobunye bobuhle ekusebenziseni igranite njengenxalenye yokuhombisa kwakho.
I-Granite iyanqabana kakhulu nobushushu, inokubamba ubunzima obuninzi ngaphandle kokuqhekeka, kwaye iyaziwa ngokuba ihlala ixesha elide kwaye ihlala ixesha elide. Nangona imiphezulu yeetafile lenyengane yomelele, ingena ngaphakathi, ifuna ukutywina rhoqo kunye nokhathalelo ukunqanda amabala kunye nokugcina imiphezulu yakho ibonakala intle.
I-quartz engokwemvelo ayenzi iziqwenga ezikhulu ngokwaneleyo ukusika ii-slabs ezifunekayo kwi-countertop yesiqithi sekhitshi. Imiphezulu yeetafile zekartz zenziwe ngamatye enjineli aqukethe amasuntswana omhlaba-ashiyekileyo amaqhekeza egranite, iziqwenga zemabhile, kunye nezinto zenkunkuma ezivela kwimveliso yodongwe, isilika, iglasi nezipili.
La masuntswana omhlaba-phantsi abotshelelwe ngee-resin zeplastikhi okanye ezibopha isamente. Inkqubo esetyenziselwa ukwenza imiphezulu yeetafile ze-quartz zikhokelela kumphezulu omelekileyo kubushushu, amabala kunye neasidi. Ukutywinwa nge-resin, izixhobo zokubala ze-quartz azifuni ukuthengiswa kwakhona okanye ukugcinwa. Kwaye ngokungafaniyo negranite, i-quartz yobunjineli ivumela iipateni ezinokuqikelelwa kunye nemibala.
Ngexesha lokuvelisa, i-quartz inokwenziwa kwimilo eyahlukeneyo kunye neefom ezivumela usetyenziso oluninzi kubandakanya imiphezulu yeetafile enomphetho wempompo. Olu luyilo lubandakanya i-angle ye-90-degree ekupheleni kwe-countertop yesiqithi, ukuqhubeka nesilayidi se-quartz ukuya ezantsi. Umjelo wamanzi wenza umphumo omangalisayo we-quartz ethululela ngaphaya komphetho njengamanzi phezu kwethambeka, wenza ukubukeka okumangalisayo. Jonga igalari yethu ye iziqithi zasekhitshini ezingamanzi Apha.
I-veining entsonkothileyo kunye noyilo zenza ukuba imabula ibe lukhetho oluhle kwaye olungaphelelwa lixesha kuyilo lwamatye ekhitshi. Ukugcina imiphezulu yeetafile zamatye emarmore emhlophe ukuya kwisiqithi sasekhitshini kunika ithuba lokwahlula isiqithi nakwikhitshi liphela.
I-Marble ihlala ixesha elide kodwa ifuna ukunakekelwa rhoqo. Imiphezulu yeetafile zemarble I-porous kwaye ichaphazeleka lula kumachaphaza alwelo olumuncu njengekofu, iwayini, okanye ijusi. I-Marble ifuna ukutywinwa malunga neenyanga ezintathu ukukhusela ilitye.
Ilitye lesepha linendawo egudileyo, enesilika kwaye yayihlala isetyenziswa kumakhaya amadala anembali. Nangona kunokubonakala ngathi lilitye elithambileyo, kunzima kakhulu kwaye alunamabala. Ilitye lesepha lifunyanwa kwimibala enzulu, etyebileyo enokuthi ibe mnyama ngaphezulu kwexesha elinje ngombala omnyama oneengcebiso zemifuno kunye neblues.
Njengetafile yesiqithi sekhitshi, ilitye lesepha linokubunyamezela ubushushu kunye nemikrwelo kunye nomonakalo ungagalelwa ngaphandle. Kodwa ukunxiba ngokuhamba kwexesha kudala i-patina efunwayo, ethi ngokwendalo idale imbonakalo ye-antique. Ukufaka ioyile yezimbiwa kwi imiphezulu yeetafile zentsimbi inokukhawulezisa inkqubo yokwenza mnyama iithoni.
I-veneer yelitye yenye yelitye lendalo elinzima, elinamaxabiso aphezulu xa ufuna ukugqiba amacala esiqithi sakho sasekhitshini. I-veneer yelitye yenziwe ngezibumba ezibunjiweyo ezizaliswe ngumxube wekhonkrithi kunye ne-iron oxides ukwenza iipateni ezinemibala ephindaphinda ilitye lendalo. Sebenzisa i-veneer yamatye kumacala esiqithi sekhitshi kuthetha ukhetho oluninzi, iindleko ezincinci, kunye nokukwazi ukutshintsha ngokulula amacala ukuba i-décor yakho iyatshintsha.
I-Brick veneer yenziwe ngokwenziwe nge-polymer edala ukuthungwa, ukubonakala kwendalo kwezitena zokwenyani, thabatha ubunzima bokugcinwa. Iipaneli zokwenza izitena ziza nezikimu ezininzi zemibala ezenza ukuba kube lula ukuthelekisa uyilo lwekhitshi lakho kulula ukuba umninikhaya alifake.
Ukwenza izitena ngezitena kuhlala ixesha elide kwaye kuyamelana nomonakalo, kuyenza ukuba ibe yinto ehlala ihleli kunye nokubonakala kweendleko eziphezulu kwaye kunzima ukufaka isitena. Isitena seBrick sikwiza njengezitena ezizodwa, ezizitena ezizodwa ezilinganayo nezitena zokwenyani, kodwa zincinci kwaye zincinci. Bona Okuninzi Imibono yesiqithi sekhitshi lezitena Apha.
Ukubonakala kwamacala amathathu, i-veneer yamatye egciniweyo inikezela ngeprofayili enamacala amathathu ngokwahluka kobukhulu, ukuphakama, kunye nokuthungwa. Oku kongeza umdla obonakalayo kwisiqithi sekhitshi.
Amanqwanqwa amatye ahleliweyo ziiphaneli ezenziwe ngeplanethi ezenziwe ngamacwecwe amatye athe tyaba ngokuqinileyo kunye nemibala eyahlukeneyo, imiphezulu kunye nobukhulu. Akukho sihlanganisi se-grout ke ilitye lijongeka ngakumbi kwendalo kwaye uyilo longeza ukugxila kwilitye ngokwalo. Le micu yamatye ingahleliyo inamathele ndawonye kwipaneli ukuze inamathele kumphezulu wecala lesiqithi sakho. Isitywina sinokusetyenziselwa ukwandisa imibala yendalo kunye nokuthungwa kwelitye.
Naluphi na isiqithi sekhitshi esiyilo osithathela indawo yakho, zombini imiphezulu yeetafile zamatye, kunye ne-veneer yamatye ikuvumela ukuba ukhethe uninzi lwesiqithi esimangalisayo nesisebenzayo.
Xa ucinga ngesiqithi sekhitshi ekhayeni lakho, cinga ngokusetyenziswa kwaso; Ukugcinwa okongeziweyo kunye nendawo yokubala, isiqithi sekhitshi esineekhabhathi kunye neeshelfu ezantsi ziya kudala indawo yokusebenza efanelekileyo.
Ukuba ufuna indawo ethe chatha yabantu ukuba baqokelelene, qiniseka ukuba isiqithi sinokuhlalisa izithintelo. Ukuba indawo iyavuma, unokuyila isiqithi sekhitshi esifezekisa zombini iimfuno ngokudibanisa iikhabhathi kunye neeshelfu ezantsi, ngesiphelo esinye esenzelwe ukuhlala. Iziqithi zasekhitshini zinokuba lula okanye zicace ngakumbi ngesinki kunye neendawo zombane.
Into elandelayo ekufuneka uyiqwalasele uyilo kunye nezixhobo zekhitshi lesiqithi kunye nendlela ezakusebenza ngayo nomxholo wakho wasekhitshini okhoyo. Ukuxuba izinto ezisetyenziselwa imiphezulu yeetafile kunye namacala esiqithi kukhokelela ekubambeni kwindawo ephambili enezinto ezinomdla.
Ndwendwela le galari ngemifanekiso engaphezulu Uyilo lweziqithi zasekhitshini .
olona suku lubalaseleyo lokutshata kwi2017
unxibe ntoni kwitheko lomtshato
Umama kaDavid ongumtshakazi wesuti yomtshato womtshakazi
Eyona migca ilungileyo evela kumakoti oyinkosazana
iingcango zekhabhathi ezimxinwa